Nnwom 95 NA-TWI - Ayeyi dwom - Bra na yɛnkamfo Awurade! - Bible Gateway
Nnwom 94Nnwom 96
Nnwom 95 Nkwa Asem (NA-TWI)
95 Bra na yɛnkamfo Awurade! Momma yɛnto ahosɛpɛw dwom mma Onyankopɔn a ɔbɔ yɛn ho ban no! 2 Momma yɛmfa aseda mmra n’anim, na monto ahosɛpɛw nnwom nkamfo no. 3 Efisɛ, Awurade yɛ Otumfoɔ Nyankopɔn, ɔhene tumfoɔ wɔ anyame nyinaa so. 4 Odi asase nyinaa so hene fi ɔbodan a emu ware yi so kosi bepɔw a ɛware yi so. 5 Odi ɛpo a ɔbɔe so ne asase a ɔno ara yɛe so. 6 Mommra, momma yɛnkotow nsom no. Momma yɛnkotow Awurade yɛn yɛfo no! 7 Ɔyɛ yɛn Nyankopɔn; yɛyɛ nnipa a ɔhwɛ yɛn; nguankuw a ɔhwɛ wɔn. Muntie asɛm a ɔka nnɛ a ɛka se,